Sangana neMurongi Wedu Mutsva Wezvehutano! - Hinds Feet Farm
Sangana neMurongi Wedu Mutsva Wehutano Wekubatana!
Nzvimbo Itsva Yakazadzwa Papurazi!
Brittany Turney achangobva kutora chinzvimbo chitsva papurazi reAllied Health Coordinator. Brittany akatanga basa rake papurazi chaizvo, semudzidzi weTR (Therapeutic Recreation Specialist) muHuntersville Day Programme. Achangopihwa rezinesi rake seTR, akatanga kushanda pano papurazi muChirongwa cheZuva. Pashure pemakore mashomanana, Brittany akadzokera kuchikoro kuti awane dhigirii reOTA (Occupational Therapy Assistant). Paaiva muchikoro nguva yakazara, Brittany akapfuurira kushanda papurazi kwenguva yakati somutarisiri wepokugara.
Iye zvino, nechikoro chake chiri shure kwake uye marezinesi maviri pasi pebhandi rake, Brittany achashandisa ese ari maviri ehunyanzvi hunyanzvi mukushandisa zvakanaka muzvirongwa zvedu zvekugara. Iye anozogadzira uye nekuita zvirongwa zvakasarudzika nenhengo yega yega svondo rese, achitarisa pakuzvivaraidza uye basa / kugona kugadzirisa.
Tinotarisira zvinhu zvinoshamisa zvichange zvichiitwa naBrittany nemumwe nemumwe wevagari vedu!